Thibi Recipes - ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ဘားချပ်ဖြင့်ရေးဆွဲဖော်ပြခြင်း
ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်မှစတင်၍ ဆောင်းပါးများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပကတိ အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာ၌ အချက်အလက်များကို ကားချပ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပုံဖော် တင်ပြကြ သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ များသောအားဖြင့် အဓိကအချက်အလက်များကို စာဖတ် ပရိတ်သတ်များ အလွယ်တကူနှင့် သိသာထင်ရှားစွာနားလည်နိုင်စေရန် ဘားချပ်၊ မျဉ်းချပ်နှင့် မြေပုံများ ကို အသုံးပြု၍ တင်ပြကြပါသည်။ ရှင်းလင်းစွာထိရောက်စွာရေးဆွဲထားသည့် ကားချပ်များဖြင့် တွဲဖက်ဖော်ပြ ထားသော ဆောင်းပါး များသည် တချက်ကြည့်ရုံဖြင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်း အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ရာတွင် “အချက် အလက်များအား ကားချပ်ဖြင့် ပုံဖော်ခြင်း” ကို ဘုံဘာသာစကားအဖြစ် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှ အသုံးပြု လာသည်နှင့်အမျှ မိမိတို့ရေးသားသည့် သတင်းနှင့်သင့်လျော်မည့် ကားချပ်များ ရေးဆွဲ တင်ပြနိုင်ရေး သည် သတင်းထောက်များအတွက် လိုအပ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ သတင်းထောက်အများစု အတွက် ရုပ်ပုံကားချပ်များရေးဆွဲရာတွင် အချက်အလက်ရင်းမြစ်များရှာဖွေခြင်း၊ အချက်အလက်များ အား ရှင်းထုတ်ခြင်းနှင့် ကားချပ်များပုံစံချခြင်းစသည့် အဆင့်ဆင့်တို့သည် အလွန်ပင်လက်ပေါက်ကပ် သည့် ငြီးငွေ့စရာ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ယင်းအခက်အခဲများက သတင်းထောက်များ၏ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော သတင်းဆောင်းပါးများ ရေးသားသည့် အလုပ်ကို အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေသင့်ပါ။ ယခု Thibi Recipes “သိပြီဒေတာချက်နည်းပြုတ်နည်းများ/ ဒေတာချက်ပြုတ်နည်းအစုံ” မှ ကိုဗစ် ၁၉ အချက်အလက်များ အား အချိန်ကာလအလိုက် အချက်အလက်ပြကားချပ်များ (time-series charts)၊ log-scale ကားချပ်များ(logarithmic-scale charts)၊ အရောင်ဖြင့် ဒေသအလိုက်ကိန်းဂဏန်းများဖော်ပြသည့် choropleth မြေပုံများ (choropleth maps)၊ စကေးကိုက်စက်လုံးများဖြင့်ဖော်ပြသော bubble မြေပုံများ (bubble maps) နှင့် ဆူးချွန်ပုံစံများဖြင့် ဒေသအလိုက်ကိန်းဂဏန်းများဖော်ပြသည့် spike မြေပုံများ (spike maps) စသည်တို့ကို ရေးဆွဲပုံဖော်နိုင်ရန် နည်းစနစ်များနှင့် အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို ယခုမှစတင်ရေးဆွဲမည့်သူဖြစ်စေ၊ ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် သတင်းထောက်မဆို အမှားအယွင်းမရှိ အလွယ်တကူရေးဆွဲနိုင်မည့် နည်းစနစ်များကို တင်ပြပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနည်းစနစ်များတွင် အဆင့် (၃)ဆင့်ဖြစ်သည့်
(၁) အချက်အလက်များပြင်ဆင်ခြင်း (Preparing the Data)
(၂) ကားချပ်ရေးဆွဲခြင်း (Crafting the Chart) နှင့်
(၃) ပရိတ်သတ်အားကားချပ်မှတဆင့်ဆက်သွယ်တင်ပြခြင်း (Communicating the Audience) တို့အား အသုံးပြု၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ကားချပ်များဆွဲနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ယခုပထမဆုံးတင်ပြမည့် နည်းစနစ်မှာ နိုင်ငံအဆင့် အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်အချိန်ကာလအလိုက် အချက်အလက်ပြဘားချပ် (time-series bar chart) ရေးဆွဲနည်းဖြစ်ပါသည်။
အချိန်ကာလအလိုက် အချက်အလက်ပြကားချပ်များ (time-series graphs) ဖြင့် အချိန်ကာလအလိုက်ပြောင်းလဲလာ‌သော အရေအတွက် (သို့မဟုတ်) ကိန်းဂဏန်းများ၏ အတက်အကျလားရာပုံစံကိုဖော်ပြသည်။ ဤနည်းလမ်းကို နေ့စဉ် ကိုဗစ်၁၉ရောဂါ တွေ့ရှိမှုနှုန်း နှင့်သေနှုန်း တို့၏ အတက်အကျလားရာပုံစံကို ဖော်ပြရာတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
ရေပြင်ညီဝင်ရိုး (horizontal axis) ကို နေ့စွဲ (သို့မဟုတ်) အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားကို ဖော်ြပရန် အသုံးပြုပြီး ဒေါင်လိုက် ဝင်ရိုး (vertical axis) ကို ရောဂါတွေ့ရှိမှုအရေအတွက် (သို့မဟုတ်) သေဆုံးမှုအရေအတွက် ကို ဖော်ပြရန်အသုံးပြုပါသည်။
မျဉ်းချပ် နှင့် ဘားချပ် နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြု၍ အချိန်ကာလအလိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသော အချက်အလက်များကို ပုံဖော်နိုင်သော်လည်း ယခုအပိုင်းတွင် ဘားချပ်ရေးဆွဲနည်းကိုသာ တင်ပြပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
‍ဘားချပ်များ ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးအစားပါဝင်မှုနည်းသည့် အချိန်ကာလအလိုက် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုပါသည်။ နေ့စဉ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိမှုများနှင့် အတက်အကျအခြေအနေများကို ဘားချပ်ဖြင့် လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနိုင်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် အချိန်ကာလအလိုက်အချက်အလက်ပြဘားချပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွ ဖန်တီး ကြည့်ကြပါမည်။ ဤဘားချပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်၁၉ ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားချိန် ၂၀၂၀ ဩဂုတ်လလယ်မှ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ကောက်ယူရရှိထားသည့် နေ့စဉ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု အရေအတွက်ကို ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအမြင့်ဆုံးနေ့ရက်ကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှားမြင်စေရန် သီးခြားအရောင်ဖြင့်ပြသထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေ့စဉ် coronavirus ဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်များကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာအစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် Covid-19 နှင့် ပတ်သတ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းများကို တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကြေငြာခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ Covid Myanmar Dashboard ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဝန်ကြီးဌာနမှ နေ့စဥ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော ကြေငြာချက်များကို စုစည်းထားသည်။ သင့်အနေနှင့် သူတို့ အချက်အလက်များကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ထားသောအချက်အလက်များကို နှိုင်းယဥ်ချင်ပေလိမ့်မည်။
အခုဆို ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်အရင်းအမြစ်ကိုတွေ့ရှိပြီးပြီဆိုတော့ ချက်ပြုတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
Dataset ကို‌ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် “Data Set” အား ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင့်အနေဖြင့် Covid-19 နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များ အားလုံးပါ၀င်သည့် Google Sheet သို့ ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်တွင် coronavirus ဖြစ်ပွားမှနေ့စဉ်အရေအတွက် လိုအပ်သောကြောင့်သက်ဆိုင်ရာ tab ကိုရှာပြီး၎င်းကိုထုတ်ယူရမည်။ “cumulative number” အမည်ရှိ tab တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော အချက်အလက်ပါရှိသည်။
ဒေတာများကို Google Sheets တွင်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် spreadsheet အသစ်ထဲသို့သာကူးယူနိုင်သည်။
သင်သည် Graph တစ်ခုပြုလုပ်ရန် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကို အောင်မြင်စွာစုဆောင်းပြီးပါပြီ!
၁.၃) ဒေတာ များကို ရှင်းလင်းခြင်း
Covid-19 ဒုတိယလှိုင်းစတင်ခဲ့သော သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ နေ့စဥ်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုသာ ပြသမည်ဖြစ်သေည်ကြောင့် ထိနေ့စွဲမတိုင်ခင်အထိ rows အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
Row2ကို ဖျက်ချင်သည့်အတွက် (from 01/02/2020) to Row 201 (15/08/2020) အထိ select မှတ်ပါ။
Right-clickနှိပ်ပြီး Delete rows2- 201 ကို select လုပ်၍ ဖျက်ပါ။
Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုနေ့စဉ်အရေအတွက်ကိုဖော်ပြရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“announced date” and “positive” variables များကိုသာလိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤ variable တွေကို ထားခဲ့ပြီး အခြားကော်လံများကို ဖျက်ပစ်ရပါလိမ့်မည်။ အချို့ကော်လံများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ သင်ဖျက်လိုပါကမြှားခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မှာသက်ဆိုင်ရာ variable ၂ ခုကိုပြီးတာနဲ့ပိုကောင်းအောင်သူတို့ကိုထပ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်
positive > New Cases
နောက်ဆုံး Google Sheet သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သင့်သည် -
Datawrapper ဆော့ဝဲလ်ထဲ မဝင်ခင် ဒေတာမြင်ကွင်းကို ဖန်တီးရန်အတွက် ၎င်း Google sheet ကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်သည်။
အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ Share ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Get Link box တွင် Change to anyone with the link ကိုနှိပ်ပါ။
ဤ URL ကို ကူးယူပြီး Bar chart များဖန်တီးရန် Datawrapper သို့ဝင်ရောက်ပါ။
ဤအဆင့်တွင် Datawrapper ကိုသုံး၍ ဘားချပ်စတင်ရေးဆွဲပါမည်။
ပထမဆုံး Datawrapper ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် https://www.datawrapper.de/ သို့သွားပါ။
Start Creating ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထိုအခါ အောက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Datawrapper work page ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ရိုးရှင်း လွယ်ကူသော အဆင့်(၄)ဆင့်ဖြစ်သည့် Upload Data- အချက်အလက်များ Upload လုပ်ခြင်း; Check & Describe- အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း; Visualize- ကားချပ်များပုံ‌ဖော်ရေးဆွဲခြင်း (Visualize); Publish & Embed- ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် embed လုပ်ခြင်း တို့ကိုသုံး၍ Datawrapper တွင် အချက်အလက်ပြကားချပ်များ တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
၂.၂) အချက်အလက်များအားစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်း
အချက်အလက်ဖိုင်တွဲအား အောက်ပါအတိုင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ခေါင်းစဉ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် နေ့စွဲအောက်မှ အချက်အလက်များကို လူအများ ပိုမိုရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်သည့်ပုံစံသို့ Datawrapper က ပြောင်းလဲ ပေးသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤပုံစံအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
“New Cases” ၏ ကော်လံအမျိုးအစားကို Number ဖြစ်ပါစေ။
ဤအဆင့်တွင် ကားချပ်များစတင်ရေးဆွဲရန် ကားချပ်အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းများ အသေးစိတ်ဖန်တီးခြင်းနှင့် မှတ်စုတိုများရေးသွင်းခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
Chart type ခလုတ်တွင်
Column Chart ကိုရွေးချယ်ပါ။
Refine ခလုတ်တွင် ကားချပ်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
‍Vertical Axis panel တွင် အပြောင်းအလဲတချို့ပြုလုပ်ပါမည်။
Custom range ကို ကွက်လပ်ချန်ပါ။
Show Grid Lines နှင့် Show Axis Label အတွက် ခလုတ်များကို ဖွင့်ပါ။
Number format အတွက် choose 1,000[.00]. ကိုရွေးပါ။
Custom ticks ကို ကွက်လပ်ချန်ပါ။
Position အတွက် inside ကိုရွေးချယ်ပါ။
Alignment အတွက် left ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောက် Horizontal Axis panel တွင် အပြောင်းအလဲတချို့ပြုလုပ်ပါမည်။
Show Grid Lines အတွက် ခလုတ်ကို ဖွင့်ပါ။
Line type အတွက် ticks ကိုရွေးပါ။
Google Sheet တွင် ဒုတိယလှိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ထုတ်နှုတ် ရှင်းလင်းထားပြီးဖြစ်သဖြင့် Custom range ကို ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။
Date format ကို ပုံစံချပါမည်။ နေ့စွဲဖော်ပြရာတွင် နေ့ရက်နှင့် လတစ်လ၏ ပထမစာလုံး ၃ လုံးတွဲဖက်ဖော်ပြသည့် ပုံစံကို ရွေးပါမည်။ ဥပမာ။ 11 Oct, 20 Sep.
ထိုပုံစံရရန် Date format ဘေးသေတ္တာတွင် (custom) ကိုရွေးပြီး ဘေးတွင် DD MMM ဟု ရေးသွင်းပါ။
Custom ticks ကို ကွက်လပ်ချန်ခဲ့ပါ။
ဤအဆင့်တွင် ကားချပ်မှ ဘားတန်းများ၏ သွင်ပြင်ကို ပုံသွင်းပါမည်။
ကားချပ်အတွက် အရောင် ရွေးချယ်ပါမည်။ ကော်လံအတွက် အရောင်ရွေးရာတွင် hex color code ဖြစ်သည့် #4ba2c5 ကို ရေးသွင်းပါ။ ဘားများသည် အပြာနုရောင်သို့ ပြောင်းလဲသွား ပါမည်။
Show values ခလုတ်ကို ဖွင့်ပါ။
On hover ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုသို့ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ရေပြင်ညီဝင်ရိုး (နေ့စွဲ) နှင့် ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုး (ဖြစ်ပွားနှုန်း) တို့ ၏ အရောင်တန်ဖိုးများကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Space between columns အတွက် 50% ဟု ရေးသွင်းပါ။
အထက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပြီးပါက သပ်ရပ်လှပသော ဘားချပ်တစ်ခုကို အောက်ပါအတိုင်း ရရှိပါမည်။
Datawrapper တွင် အညွှန်းများကို ဒေါင်လိုက် (သို့မဟုတ်) အလျားထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် ဝင်ရိုးများ၏ အညွှန်းများကို အခြားနည်းလမ်းများ alternatives ဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အချို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအနေဖြင့် ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးသည် ပိုးတွေ့ရှိမှုအရေအတွက်ကို ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို မသိရှိသည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အညွှန်းစာသား (text annotation) ကို အသုံးပြု၍ “ဤဘားချပ်တွင် ၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်မှ စတင်၍ နေ့စဉ် ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရေအတွက်ကို ဖော်ပြထားပါသည်” ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည့် “This chart shows the daily number of confirmed COVID-19 cases in Myanmar since March 24, 2020” ဟု မှတ်စုတိုအဖြစ် ထည့်သွင်းရှင်းလင်းပါမည်။
အညွှန်းရေးသားသည့်အပိုင်း Annotate အတွက် ကွက်လပ်နေရာများတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
(ခေါင်းစဉ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းအတွင်း နေ့စဉ်ပိုးတွေ့ရှိမှုများ)
(ရှင်းလင်းချက်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက် တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်၁၉ရောဂါပိုး အသစ်တွေ့ရှိသူပေါင်း ၂,၀၀၀ ရှိပြီး စတင်ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်မှစ၍ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။)
(မှတ်ချက်။ ဤဘားချပ်တွင် ၂၀၂၀ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၆ ရက်မှ စတင်၍ နေ့စဉ် ကိုဗစ်၁၉ ပိုးတွေ့ရှိမှုအရေအတွက်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။)
ဘားချပ်၏ အဓိကျကသော အစိတ်အပိုင်းကို ထင်ရှားအောင်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယခု ရေးဆွဲ ထားသော ဘားချပ်တွင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအမြင့်ဆုံးနေ့သည် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့သည် မိမိဆောင်းပါး၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်ဆိုပါက ထိုရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု အမြင့်ဆုံးနေ့ကို ဘားချပ်တစ်ခုလုံးတွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်စေရန် တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
Highlight elements အောက်သေတ္တာ၊ညာဘက်ထောင့်ရှိ အောက်သို့ညွှန် ထားသောမြှား ကိုနှိပ်ပါ။
မိမိရွေးချယ်လိုသည့်နေ့စွဲ (ပိုးတွေ့ရှိမှုအမြင့်ဆုံးနေ့) ဖြစ်သည့် 10/11/2020 ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပြင်ဆင်ချက်များ ဆောင်ရွက်ပြီးသောအခါ အောက်ပါပုံအတိုင်း ဘားချပ်ဖြစ်ပေါ် ပါလာမည်။
‍Text annotations နှင့် Highlight range အပိုင်းကို ကျော်ပါ။
ပုံကားချပ်များသည် စာဖတ်ပရိသတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သည့် အထောက် အကူဖြစ် သော်လည်း လွဲမှားသောအဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူမှုများလည်း ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်၍ မရေရာမသေချာမှုများစွာရှိနေကြောင်း ပရိသတ်ကို အသိပေးရပါမည်။ မိမိတို့သည် ရောဂါပိုးစစ်၍တွေ့ရှိသူအရေအတွက်ကိုသာ အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေသောအရေအတွက်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းရပါမည်။ ယခုကဲ့သို့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအ‌ခြေအနေများတွင် လက်တွေ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှု သည် စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုထက်များစွာကျော်လွန်နေနိုင်ပါသည်။
သတင်းထောက်များအနေဖြင့် မိမိတင်ပြမည့် သတင်းကို အကောင်းဆုံးရှင်းလင်းပုံဖော်နိုင်မည့် ပုံကားချပ် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ယခုနမူနာပုံစံတွင် အသုံးပြုထား သော အချိန်ကာလအလိုက်အချက်အလက်များကို မျဉ်းချပ် (သို့မဟုတ်) ဘားချပ်နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ရေးဆွဲဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ဘားချပ်များသည် နေ့စဉ်ပိုးတွေ့ရှိမှုကို ဖော်ပြရန် အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီး ဘားချပ်ရှိ ထောင့်မှန်စတုဂံတုံးတစ်ခုချင်းစီသည် နေ့တစ်နေ့စီအတွက် ပိုးတွေ့ရှိမှုကို ရှင်းလင်းစွာ ညွှန်ပြနိုင်သည်။ ဘားချပ်ကိုကြည့်ချင်းဖြင့် နေ့စဉ်ပိုးတွေ့ရှိသူအရေအတွက် ပြောင်းလဲမှုကိုလည်း ထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမည်မျှများပြားသည်ကို သိရှိရန် အတွက်မူ စုစုပေါင်းအရေအတွက်ပြကားချပ် Cumulative Chart ဖြင့် ရေးဆွဲပြသရန်လိုအပ်ပါသည်။ ** စုစုပေါင်းအရေအတွက်ပြကားချပ်တွင် နေ့အလိုက်ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များသည် “ယခင်နေ့များက ပိုးတွေ့ရှိမှုအရေအတွက်ကို ၎င်းနေ့တွင်ထပ်တိုးပိုးတွေ့ရှိသူအရေအတွက် ထည့်ပေါင်းပြီး ရရှိသည့်စုစုပေါင်းအရေအတွက်”ကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းပိုးတွေ့ရှိမှု ကို ‌ဖော်ပြနိုင်မည့် Line Chart ရေးဆွဲနည်းကို နောက်လာမည့် ဒေတာချက်နည်းပြုတ်နည်းအသစ်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
**ကိုဗစ် ၁၉ရောဂါအတွက် စုစုပေါင်းရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှင့် အသစ်တွေ့ရှိမှုများကို ဖော်ပြရာတွင် ကားချပ်အမျိုးမျိုး၏ အသုံးဝင်ပုံများကို SAS ၏ blog တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။